अब भाइबरमा नेपाली भाषामै महजोडीको स्टिकर
मौलिक चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टोरी बैंक’ स्थापना
किन गर्ने मर्निङ वाक ? यस्ता छन् फाइदाहरू
कोरोनाबाट संक्रमणबाट थप ७ जनाको मृत्यु
बुधबार कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?(विवरणसहित)
भक्तपुरका ९३ सहित उपत्यकामा थपिए ९०२ कोरोना संक्रमित
पछिल्लो २४ घन्टामा १०५७ कोरोना संक्रमित संक्रमणमुक्त
पछिल्लो २४ घन्टामा थपिए १५५९ जना कोरोना संक्रमित
You are at:Home»मनोरञ्जन»अब भाइबरमा नेपाली भाषामै महजोडीको स्टिकर
By bktnews Posted on	 September 15, 2020 मनोरञ्जन, सूचना प्रविधि
काठमाडौं । फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा स्टिकरको प्रयोग बढ्दै गएको छ । देखेर प्रक्रिया जनाउने भन्दा स्टिकर पठाउने प्रयोगकर्ताको रुचीलाई ध्यानमा राख्दै भाइबरले नेपाली भाषामै नयाँ स्टिकर ल्याएको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।
तर, यसपटक भाइबरले नेपालका वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको तस्बिर अंकित नयाँ स्टिकर ल्याएको छ । भाइबरले महजोडीको विभिन्न भाव झल्कने तस्बिर र छोटा शब्द अंकित स्टिकर प्रयोगमा ल्याएको हो ।
हरिवंश आचार्यले आफूहरु भाइबरसँग जोडिएको जानकारी दिएका छन् । नेपालमा लाखौं प्रयोगकर्ता रहेको भाइबरले नेपालीलाई लक्षित गरि बेला बेला फरक फरक स्टिकर ल्याउने गरेको छ । उक्त स्टिकर च्याटमा कुरा गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मितिः २०७७ भदौ ३० मंगलबार
अनुरागलाई तत्काल पक्राउ नगरे भोक हड्ताल गर्ने पायलको चेतावनी
अमिताभ बच्चनले गरे अंगदान गर्ने घोषणा